२०१ Marketing को लागि मार्केटिंग भविष्यवाणी Martech Zone
एक बर्षमा म पुरानो क्रिस्टल बललाई काट्छु र रुझानहरुमा केहि मार्केटिंग पूर्वानुमान साझा गर्दछु जुन मलाई लाग्छ कि साना व्यवसायका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ। गत वर्ष मैले सामाजिक विज्ञापनको वृद्धि, एसईओ उपकरणको रूपमा सामग्रीको विस्तारित भूमिका र मोबाइल उत्तरदायी डिजाइन अब वैकल्पिक हुनेछैन भन्ने तथ्यको सही पूर्वानुमान गरेको थिए। तपाईं मेरो २०१ 2015 को मार्केटिंग सबै पढ्न सक्नुहुन्छ भविष्यवाणी र हेर म कति नजिक थियो। त्यसोभए २०१ read मा हेर्नको लागि शीर्ष ट्रेन्डहरू पढ्नुहोस्।
सामग्री, सामाजिक मिडिया र SEO मार्केटिंग भविष्यवाणी
प्रत्यक्ष सामाजिक प्रसारणहरू: पेरिस्कोप, मेरकट र नयाँ फेसबुक लाइभ जस्ता अनुप्रयोगहरूसँग "अहिले के हुँदैछ" साझेदारी गर्न पहिले भन्दा सजिलो छ। महँगो भिडियो उपकरण वा बोझिला प्रत्यक्ष स्ट्रिमि applications अनुप्रयोगहरूको आवश्यक छैन। तपाईंलाई आवश्यक सबै स्मार्ट फोन र इन्टरनेट वा सेल जडान हो र तपाईं कुनै पनि समयमा कुनै पनि कुरा प्रसारण गर्न सक्नुहुनेछ। घटनाबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने क्षमता, खुशी ग्राहकको साथ अन्तर्वार्ता वा द्रुत उत्पादन प्रदर्शन तपाईंको जेबमा छ। न केवल भिडियो प्रयोग गर्न सजिलो छ, तर सment्लग्नता र साझेदारीको तथ्या्क सरल फोटोग्राफहरू भन्दा नाटकीय रूपमा उच्च छन्। यदि तपाईं २०१ 2016 मा याद गर्न चाहानुहुन्छ भने त्यसो गर्न तपाईंलाई भिडियो आवश्यक पर्दछ।
अब खरीद गर्नुहोस्, अब, अब!: गत बर्ष साना व्यवसाय मालिकहरूले जैविक दृश्यता ड्रप देखे पछि सामाजिक प्लेटफर्ममा विज्ञापन गर्न दवाव महसुस गरे। विज्ञापनलाई अझ आकर्षक बनाउनको लागि, फेसबुक र पिन्टेरेस्टमा नयाँ "खरीद गर्नुहोस्" सुविधाहरूको थप जानकारीले सामाजिक विज्ञापनलाई जागरूकता निर्माणबाट बिक्री उत्पादनमा परिवर्तन गर्नेछ। म यो क्याच मा आशा को रूप मा अधिक सामाजिक प्लेटफार्मों अनुसरण गर्नेछ।
तपाइँको सामग्री पढ्दै: गत वर्ष हामीले अनियमित लिंक निर्माण र कुञ्जी शब्द भरिने रणनीतिहरूलाई अलविदा भन्यौं। शुभ समाचार - यसले प्रभावकारी एसईओ रणनीतिको मुख्यको रूपमा सामग्रीमा बदलाव आयो। नराम्रो समाचार: वेब पृष्ठहरू र सामाजिक मिडिया साइटहरूमा सामग्रीको विस्फोटनले यो नोटिस गर्न पहिले भन्दा अझ गाह्रो बनाएको छ। २०१ 2016 मा सफल कम्पनीहरूले आफ्नो वितरण रणनीतिहरूमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नेछन्, लक्षित ईमेल संचार र समर्पित सामाजिक समूहहरू मार्फत सही व्यक्तिहरूको सामु उनीहरूको सामग्रीहरू प्राप्त गर्दै। ।
वेब डिजाइन मार्केटिंग भविष्यवाणी
अलविदा साइडबार: प्रत्येक वेबसाइटको एक पटक मानक सुविधाहरू, तिनीहरू छिटो लुप्त हुँदैछन् किनकि उनीहरू मोबाइल वातावरणमा राम्रोसँग काम गर्दैनन्। साइडबारमा महत्वपूर्ण जानकारी मोबाइल उपकरणहरूमा पृष्ठको तल झर्छ तिनीहरूलाई कार्यको लागि कलको कुनै पनि प्रकारको लागि एक घरको रूपमा बेकार बनाउन।
मोड्युलर डिजाइन: मोडुलर सोफाको बारे सोच्नुहोस्। तपाईं टुक्राहरू एउटा काउच वा प्रेम सिट र छुट्टाछुट्टै कुर्सी बनाउन सक्नुहुन्छ। डिजाइन उपकरणको विस्तृत श्रृंखलाको साथ (एलिगन्ट थिमहरू द्वारा देवी सहित), वेब विकासकर्ताहरूले पृष्ठहरू निर्माण गर्न सक्दछन् जुन एक विशेष उद्देश्य पूरा गर्न व्यवस्था गरिएको अलग मोड्युलहरूको श्रृंखला हो। यस मोड्युलर दृष्टिकोणले वेब डिजाइनरहरूलाई विशेष विषयवस्तुको बन्धनबाट स्वतन्त्र गर्दछ। प्रत्येक पृष्ठ पूर्ण भिन्न हुन सक्छ। २०१ mod मा यी मोड्युलहरूको अधिक नवीन प्रयोग हेर्न अपेक्षा।
पटक्कै डिजाइन छैन: पछिल्ला केही वर्षहरुमा, न्यूनतमवादले शासन गरेको छ। साधारण डिजाइनहरू, छाया वा अन्य तत्वहरू बिना जसले छविहरूलाई गहिराई र आयाम हावी दिन्थ्यो किनभने तिनीहरू कुनै पनि प्रकारको उपकरणमा छिटो लोड हुन्छन्। जबकि टेक्नोलोजी सुधार हुँदैछ र दुबै एप्पल र एन्ड्रोइडले अब परिमार्जित, अर्ध फ्लैट डिजाइन समर्थन गर्दछ। यो शैली मोबाइल मा creeps रूपमा यो वेब डिजाइन मा पछाडि यो काम गर्दछ। मलाई आशा छैन कि हामी दस वर्ष पहिले ड्रप छाया वा लोकप्रिय भिजेको हेराईमा फर्केर हेर्नेछौं, तर हामी २०१ slightly मा थोरै धनी देखिने डिजाइनहरूको लागि अगाडि देख्न सक्छौं।
उपकरणहरू एक अर्कासँग कुरा गर्दै: मैले सोचे कि अन्तर्क्रियात्मक मार्केटिंगमा सर्ने काम यो भन्दा चाँडो पकडमा जान्छ यसैले म आईओटी (इन्टरनेट अफ थिंग्स) को बारेमा यो भविष्यवाणी २०१ 2015 देखि २०१ 2016 सम्म सार्न लागिरहेको छु। IoT अनुप्रयोगहरू हुन् जसले उपकरणहरू र / वा उपकरणहरू बीचमा संवादलाई अनुमति दिन्छ। मानव। उदाहरणको लागि, तपाईंको कारमा निर्मित स्मार्ट इलेक्ट्रोनिक्सले तपाईंलाई बताउँछ जब तपाईंको टायर प्रेशर कम छ वा तपाईंको तेल परिवर्तन गर्ने समय भयो। मेरो Fitbit स्वचालित रूपमा मेरो स्मार्ट फोनको साथ सिंक हुन्छ जुन मलाई मेरो दैनिक लक्ष्यहरू नजिक हुँदा मलाई थाहा दिन्छ। यदि स्मार्ट उपकरणहरूले अन्य उपकरणहरूमा सतर्कताहरू पठाउन सक्दछ भने यो तार्किक मात्र हुन्छ उनीहरूले व्यापारी र सेवा प्रदायकहरूलाई सन्देश पठाउन सुरू गर्नेछन्। तपाईंको भट्टीले तपाईंको HVAC टेक्नीशियनलाई सचेत गराउन सक्छ जब यसलाई सर्भि be गर्न आवश्यक पर्दछ, वा तपाईंको रेफ्रिजरेटरले दूध रिकर्ड गर्न सक्दछ जब शिल्फ खाली छ। २०१ 2016 मा त्यहाँ धेरै अनुप्रयोगहरू छन् जसले तपाईका ग्राहकहरूलाई सबै प्रकारका उत्पादनहरू र सेवाहरूको लागि अनुस्मारकहरू र सतर्कताहरूको लागि साइन अप गर्न अनुमति दिन्छ
हामी सँधै ट्रेंडमा रुचि राख्छौं, विशेष गरी साना व्यवसाय मालिकहरू (१०० भन्दा कम कर्मचारी भएको कम्पनीहरू) बीच। यदि त्यो तपाइँलाई लाग्छ भने, के तपाइँ तपाइँको वार्षिक सर्वेक्षण पूरा गर्न केहि मिनेट लिन सक्नुहुन्छ?
टैग: मार्केटिङमार्केटिंग उपकरण